I-Kozákov (i-744 m) iyintaba ephakeme kunazo zonke yeKozákovský igwadule nePharadesi yaseBohemian. Kusukela ekuqaleni, phezulu kwafunwa njengesitolo samatshe ayigugu, lapho abazingeli bezikhathi zangaphambili babenza amathuluzi alula. Emikhawulweni yodwala lokugcwalisa i-agate, i-jaspi, i-amethyst, i-crystal, imifino kanye namanye amatshe ayigugu angamatshe ayigugu ayekhishwa. Isayithi yasetshenziswa eNkathini Ephakathi ukuhlobisa amathempeli. I-Kozákov nayo iyindawo ethandwayo yokupaka i-paragliding.
Ingxenye enkulu kunazo zonke zensimu Kozákova yakhiwa Palaeozoic amatshe, okuyizinto on phezulu enyakatho nasempumalanga kuthululwa imbozwe basalt ephakeme kanye imali mlilo. Ngaphambi kwe-6 kuya ku-4 yezigidi zeminyaka, i-Kozakov yayiyi-volcano esebenzayo. Ohlangothini olusentshonalanga lweKozákov lwakhiwe ikakhulukazi ngamatshe amakhulu ase-Upper Cretaceous Cenomanian. Lezi ziphuliwe zibe yiziqephu ezimbalwa ezisezingeni eliphezulu futhi zilethwe kufomu labo lamanje.
Kukhuphuka okukhulu njenge-asymmetric endaweni yokuphuma okuphezulu kwe-anticlinical basaltandezite (melaphyry) ngethambeka eliphansi neliphansi lasempumalanga (15- 20 °) kanye nesiqongo esicabaxekile sendaba yokugeleza kwe-neogene olivine basalt (basalt) egibela phansi emgodini kuya eningizimu mpumalanga. Esithambekeni esithe xaxa nasentshonalanga esithe xaxa kunamatshe amatshe amakhulu wamatshe waphezulu (max. 667 m) ngezindonga ezingaphelele, imibhoshongo yamadwala, imigede emihumeni, nemihume, kanye nezinqwaba ezinamadwala. Kukhona imifudlana egqamile kanye nolwandle lwamatshe emithambekeni yemifula nasezintabeni ze-basalt.
Emthambekeni oseningizimu-ntshonalanga kunamakhemikhali amaningi amnandi okuthiwa iVotbecbec Quarry. I-Votrubka iyimfihlo, futhi ihlanganisa iMyuziyamu encane yamatshe ayigugu. Ukuze uthole imali encane, kungenzeka ukumba emgodini usebenzisa amathuluzi abolekiwe ngisho nanamuhla ukuthola amatshe ayigugu amatshe, umnikazi angabe esewa.
Igquma lingendiza kaJeštěd-Kozákov, umgibeli weKozákov, umgibeli weKomárovský, umgibeli we-Žlábecký nengxenye yeKozákov.
Amathegi: Kozákov panorama
Indawo: I-Kozákov, i-513 01 i-Chuchelna, eCzech Republic